Let's Talk | MRTV-4
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၃-၃)]
ကျွန်တော့်မိန်းမကပါ ကျွန်တော်တို့မသန်စွမ်းတွေကို ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကွဲခဲ့ရတယ် ...
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၃-၂)]
နေ့ကလေးထိန်းထားတယ်ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ် သူ့ကိုထိန်းပေးမယ့်ကျောင်းကိုရှာပြီး ကျွန်မပို့ခဲ့ရတယ် .
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၃-၁)]
" သူမွေးမွေးချင်းမှာ သာမာန်လို့ပဲ ကျွန်မတို့သိထားပါတယ် သူကတစ်နှစ်ကျော်လည်း စကားမပြောဘူး နှစ်နှစ်လည်းစကားမပြောဘူး သုံးနှစ်ထိလည်း စကားမပြောဘူး နောက်လမ်းလည်းမလျှောက်ဘူး .. " (ဒေါ်မာမာဦး )
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၂-၃)]
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၂-၂)]
မသန်စွမ်းကတော့မွေးရာပါမဟုတ်ပါဘူး... ၈လသားမှာကာကွယ်ဆေးထိုးရင်းဖြစ်သွားတာပါ ... (နိုင်ဖြိုးအောင်)
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၂-၁)]
မသန်စွမ်းဖြစ်ချင်တဲ့သူ လက်ညှိုးထောင်ပါဆို ဘယ်သူထောင်မလဲလို့မေးတယ် ... ဘယ်သူမှမထောင်ဘူး ....
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၁-၃)]
" သူတို့မထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန် ဦးလေး ဒေါ်လေးတို့လည်း မရှိတော့တဲ့အချိန်တစ်ယောက်ထည်းရပ်တည်ဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင် ကျွန်တော့်ညီလေးညီမလေးတွေလည်းရှိနေသေးတော့ လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်လေးတွေစဉ်းစားမယ် ရွေးမယ်ပေါ့ .."
Let's Talk [မသန်သော်လည်း စိတ်ဓာတ်အင်အားစွမ်းသူများ (အပိုင်း-၁-၁)]
" ခံစားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မသန်စွမ်းကလေးတွေနဲ့ သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် မိဘတွေခံစားချက် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့များပြားပါတယ် ဘာလဲမွေးလဲ သားယောက်ျားလေးဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ် ဒါပေမယ့် မွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ သားလေးဟာပုံမှန်ထက် ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ ၀မ်းမသွားဘူး၊မျက်ခုံးလေးကဝေးတယ်၊နားလေးမှာ အတွန့်လေးနှစ်တွန့်ပါတယ်၊နှာပြားတယ်.. "
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၂-၃) ]
ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်ကလည်း မိသားစုကိုပစ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်း အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထဲမှာအကျဉ်းကျနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ အဲ့ဟာမျိုးဇာတ်ကို မပေးရကောင်းလားဆိုတဲ့ ကရုဏာဒေါသ ပရိသတ်တွေမှာရှိပါတယ်
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၂-၂) ]
ကျွန်မသေချာတော့ မသိဘူး သိန်းဘယ်လောက်လဲ ကျွန်မကြောင့် စာရင်းကွာနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာတော့ ကျွန်မအားလုံးကို မည်သည့်အချိန် မည်သူနဲ့မဆို ကျွန်မအစစ်ဆေးခံနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြီးသားပဲ
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၂-၁) ]
အခုခေတ်မှာ သီချင်းသိပ်ကောင်းလို့ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေက သူရောင်းရတဲ့ အချပ်အရေအတွက်က သောင်းဂဏန်းပြည့်ဖို့ခဲယဉ်းတယ် ကျွန်မတို့တုန်းကတော့ ဥပမာ ဒိုင်ယာရီဆိုရင် အချပ်သုံးသိန်းနီးပါးရောင်းရခဲ့တယ် အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ခိုးခွေတွေရှိတော့ရှိတယ် ဒီလောက်တော့မများဘူး ခိုးခွေတွေမရှိရင် ဒီ့ထက်ပိုရောင်းရမှာပေါ့ အနေအထားကလည်း အခုကတော်တော်ကိုကွာသွားတယ် နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ခေတ်မှာ ကိုယ်က series မှာအရှုံးခံပြီးထုတ်ရင် ကိုယ်က ဒီ series မှာရှုံးပေမယ့် ကိုယ်အဆိုတော်ဖြစ်သွားရင် အခြားပွဲတွေမှာ လိုက်ဆိုပြီး ပြန်ရှာလို့ရတယ် အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ဒါလည်းကျားကန်ပြီးလုပ်နေရတဲ့ သဘောပေါ့..
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၁-၃) ]
အစ်မ တကယ်တမ်းကျတော့အလုပ်မလုပ်ခင်တုန်းကဘယ်လိုလေ့ကျင်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး၊တကယ်အလုပ်လုပ်တော့မှအလုပ်ကသင်သွားတာပိုများပါတယ်။ကိုမီးပွားတို့ ဆို မှန်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုရူးသွပ်ရမလဲ ဘယ်ပုံစံကကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေလဲကအစအဲလိုမျိုးလုပ်ဖို့ ကိုတိုက်တွန်းတယ် ကိုရန်လေးဆိုလဲလက်တွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကင်မရာရှေ့ ရောက်ခဲ့တာလဲ ကိုရန်လေးနဲ့ ပဲလေ..တကယ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တွေကကိုယ့်ရဲ မြင်ဆရာတွေ သင်ဆရာတွေပါပဲ....
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၁-၂) ]
Let's Talk [ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် (အပိုင်း-၁-၁) ]
Let's Talk [ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၁-၃) ]
အစ်မတို့ ငယ်ဘ၀က လားရှိုးမှာနေကြတာ အစ်မတို့ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ (၇) ယောက်ရှိတယ် အဖေကလက်သမားလုပ်တယ် အမေကကောက်ညှင်းပေါင်း အကြော်ရောင်းပြီး သားသမီး (၇) ယောက်ကို လုပ်ကျွေးတယ် အစ်မတို့မောင်နှစ်မတွေကလည်း အဖေနဲ့အမေ အလုပ်လုပ်တာနဲ့ မပြည့်စုံတော့ အစ်မတို့တတ်နိုင်သလောက် အဖေနဲ့အမေကို ၀ိုင်းကူခဲ့ကြတယ် အစ်မက မနက်ပိုင်းကျောင်းမသွားခင် အမေ့ကို ကောက်ညှင်းပေါင်းဝိုင်းကူ ရောင်းပေးတယ် ..
Let's Talk [ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၁-၂) ]
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan (အပိုင်း-၂-၃) ]
အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းရှိနေစေချင်ပါတယ် အဲ့အတွက် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ် ဒါမှကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းနဲ့ အနာဂတ်အခြေအနေ လှပမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan (အပိုင်း-၂-၂) ]
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း နမူနာစံပြ အနေနဲ့ မင်းတို့လည်းမင်းတို့နေရာမှာ မင်းတို့တာဝန်မယူနိုင်တော့ရင် လွှဲပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့သလိုပဲ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် အင်မတန်နှလုံးသားလှတဲ့ အင်မတန် သတ္တိကောင်းတဲ့ သူတွေပါ အဲ့လိုလူတွေကို ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး အမြဲတမ်းရှိနေတယ်
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan (အပိုင်း-၂-၁) ]
ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ဥက္ကဌ ရာဇ၀င်ထဲမှာ အရမ်းလေးစားပြီး သတ္တိကောင်းတဲ့ လူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ ဦးကြည်စိုးထွန်းနဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းပါ
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan(အပိုင်း-၁-၃) ]
သမီးက တကယ့် artist ပီသတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ သမီးရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာက သမီးမျက်နှာမှာ ထွက်ကိုထွက်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည့်မှုထားပြီး တော့ လုပ်သွားပါဆိုပြီးပြောတော့ တကယ်လည်းလုပ်ပြီး editing ကိုပြန်ကြည့်တော့ တကယ့်ကိုသနားစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်ရော
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan (အပိုင်း-၁-၂) ]
ဦးမျိုးကို ရာဇ၀င်ရိုင်းသူများ ဇာတ်ကားမရိုက်ခင်မေးခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခုက သမီးစိတ်ထားက နူးညံ့တယ် အရမ်း Emotional ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့်သမီးမျက်နှာအနေအထားက ဘုရားပေးတာ မျက်နှာကမာတယ်ထန်တယ်လို့အများကပြောကြတယ်ဆိုတော့ သနားစရာကောင်းတဲ့ character မျိုးလုပ်ရင်လူတွေကသနားနိုင်ပါ့မလား သနားစရာတကယ်ကောင်းပါ့မလားလို့ ဦးမျိုးကိုပြောခဲ့တယ် ဦးမျိုးက မဟုတ်ဘူးသမီး သမီးက တကယ့် artist ပီသတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ သမီးရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာက သမီးမျက်နှာမှာ ထွက်ကိုထွက်လိမ့်မယ် အဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည့်မှုထားပြီး တော့ လုပ်သွားပါဆိုပြီးပြောတော့ တကယ်လည်းလုပ်ပြီး editing ကိုပြန်ကြည့်တော့ တကယ့်ကိုသနားစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်ရော
Let's Talk [ ဦးမျိုးမင်း နှင့် Laila Khan(အပိုင်း-၁-၁) ]
ဦးမျိုးကို ရာဇ၀င်ရိုင်းသူများ ဇာတ်ကားမရိုက်ခင်မေးခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခုက သမီးစိတ်ထားက နူးညံ့တယ် အရမ်း Emotional ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့်သမီးမျက်နှာအနေအထားက ဘုရားပေးတာ မျက်နှာကမာတယ်ထန်တယ်လို့အများကပြောကြတယ်ဆိုတော့ သနားစရာကောင်းတဲ့ character မျိုးလုပ်ရင်လူတွေကသနားနိုင်ပါ့မလား သနားစရာတကယ်ကောင်းပါ့မလားလို့ ဦးမျိုးကိုပြောခဲ့တယ်
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကားများ အပိုင်း(၅-၃) ]
စာရေးဆရာမ ဂျူး = " အချစ်ကို ကျွန်မ တန်ဖိုးထားတယ် အချစ်က နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးနေတယ်.. "
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကားများ အပိုင်း(၅-၂) ]
မြတ်သက်မွန် = " သူတို့ရွာမှာ ခွေးဂေဟာကြီးရှိနေတာကို ရွာခိုက်တယ်လို့ မြင်နေကြတယ် ရွာမှာ ဘာကြောင့်သေသေ ဒီခွေးဂေဟာကြီးရှိနေလို့ ခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မခွေးခြံကို ရွေ့စေချင်ကြတယ်.. "
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကားများ အပိုင်း(၅-၁) ]
ချစ်သုဝေ = " ထရေဇာတို့နိုင်ငံမှာက ပညာတတ်တွေကို Keep မလုပ်ထားနိုင်ကြဘူး ပညာတတ်တွေကို ဆုံးရှုံးသင့်သလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် .. "
Let's Talk [ မထက် (Pop Soul) ] -၃
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ကပုံစံတူတစ်ခုကို ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ မထက်ရပ်တည်တာ ဒါပေမယ့် သူများတွေ ပြောသလို မိန်းမအစစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး...
Let's Talk [ မထက် (Pop Soul) ]-၂
ဒါပေမယ့်ကိုယ်မှာက မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ အခု sex ချိန်းထားတယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မေ့ဖျောက်လို့မရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်
Let's Talk [ မထက် (Pop Soul) ]-၁
လူတိုင်းက မိသားစုရှိသင့်တယ် မိသားစုရှိမှ နွေးထွေးလုံခြုံတယ်လို့ မထက်ခံစားရတယ် မိသားစုဆိုတာ လိုချင်တယ်ဆိုတာထက် အိမ်ထောင်တစ်ခုဆိုတာတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ထင်တယ်
Let Talk [ အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း-၂-၃)]
အခုအချိန်မှာ အစ်မဘာလို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ အစ်မမင်းသမီးမလုပ်လဲနေလို့ရသွားပြီလေ နေရာတစ်နေရာရသွားပြီ မှတ်တိုင်တစ်ခုရသွားပြီ အစ်မမိဘအတွက် အားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ အစ်မဘ၀အတွက် ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့လိုလူမျိုးတော့ပြန်လိုချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရာအားလုံးကို အတိတ်ကအတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ရမှာပါ အသစ်မှပြန်မဖြစ်တော့တာ
Let Talk [ အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း-၂-၂)]
ဒါပေမယ့်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရာအားလုံးကို အတိတ်ကအတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ရမှာပါ အသစ်မှပြန်မဖြစ်တော့တာ
Let Talk [ အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း-၂-၁)]
အခုအချိန်မှာ အစ်မဘာလို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ အစ်မမင်းသမီးမလုပ်လဲနေလို့ရသွားပြီလေ နေရာတစ်နေရာရသွားပြီ မှတ်တိုင်တစ်ခုရသွားပြီ အစ်မမိဘအတွက် အားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ အစ်မဘ၀အတွက် ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့လိုလူမျိုးတော့ပြန်လိုချင်ပါတယ်
Let Talk [အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း၁-၃)]
အစ်မအဖေဆီက ရတဲ့ပညာ၊သွန်သင်မှုတွေက အစ်မအတွက် အားဖြစ်စေခဲ့တယ် အစ်မရဲ့ အနုပညာလောကမှာ ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုရင် အကယ်ဒမီလိုချင်လို့ အဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားလာတာပါ
Let Talk [အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း၁-၂)]
အစ်မကလည်း ငါ့အဖေမှာ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင်သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီး အမြဲဂုဏ်ယူနေရအောင် ဖြစ်စေချင်တယ်
Let's Talk [အကယ်ဒမီ မြတ်ကေသီအောင် (အပိုင်း၁-၁)]
အကယ်ဒမီဆိုတာ အရမ်းလိုချင်ခဲ့တဲ့ဆုပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစ်မအဖေကဇာတ်ပို့ အစ်မအဖေက အရမ်းဝါတနာပါတယ် အစ်မအဖေက သူ မဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို အစ်မအပေါ်မှာ အရမ်း ဖြစ်စေချင်တယ်...
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၂-၃) ]
ကားကြီးဆိုလည်း မိတ်ကပ်ဆံပင်က ကိုယ်လည်းမလုပ်တတ်တော့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ရတော့ ကိုယ့် actor ကြေးထဲကနေ ကုန်ပြန်တာပေါ့ .. အားလုံးအနုပညာသမားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲကစိတ်က ပီပြင်ချင်တယ် စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရတဲ့ actor ကြေးလေးနဲ့ မျှတပြီး လုပ်ရတာပေါ့.....
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၂-၂) ]
အဲ့လိုလေးတွေလာတော့ ကိုယ်ရတဲ့ actor ကြေးထဲကနေ ငါတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေ လုပ်ရမှာဆိုတော့ လမ်းဘေးအ၀တ်အစားလည်းဝတ်လို့မရတော့လည်း Desiger တွေခေါ်ပြီးအပ်ရတာပေါ့
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၂-၁) ]
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံမှာလည်း ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ဖို့ကို အဓိကကျတဲ့ အခန်းလိုပါတယ် ဂွမ်းတို့ရဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံဘ၀က ဇာတ်ပို့သာပြောတယ် ရတဲ့ actor ကြေးကသာပြောတယ် ပါလိုက်တာနဲ့ သူဌေးသမီး ကိုရီးယားမင်းသမီးရူး ကုမ္ပဏီသူဌေးကြီး
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၁-၃) ]
ဒါကကျတော့ အချိန်ကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ မပြဖြစ်သွားတာလည်း ဖြစ်မှာပါ ဒီဟာလေးကွက်ပြလိုက်တာကျတော့ ပရိသတ်တွေက ဒါနဲ့ပဲ အကယ်ဒမီရသွားလားပေါ့
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၁-၂) ]
ခင်လှိုင်ကတော့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကို လှုပ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီအောင်ဘာလေကားမှာ တစ်ကြိုပြေးရင်းနဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်သွားတာပေါ့
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ (အပိုင်း-၁-၁) ]
ဤအရာကို အချစ်ဟုခေါ်သလား ကားလေးကို Press Show စပြတဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်တွေ ကြည့်လိုက်ကတည်းက မဂွမ်းရဲ့ လုပ်ကွက်တွေဟာ တကယ့်ကျေးလက်တောသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံပီပြင်တယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ အလွမ်း၊အချစ်၊ဟာသ၊ဒရမ်မာ ရသမျိုးစုံပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့စိတ်ထဲမှာ အရမ်းတင်းတိမ်ပြီး ၀မ်းသာပြီး ဒီကားလေးနဲ့ဆို မဂွမ်းက တကယ်ရနိုင်တယ် ဆိုပြီး တစ်ကြိုပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန် ငါများပေါ့ ဒီကားလေးနဲ့ ရနိုင်လားဆိုပြီး ကိုယ်ပါ ရင်ခုန်လာတာပေါ့နော်...
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၂-၃)]
(၅) နာရီဆိုတော့ အဓိက ရုံးချိန်ပဲ
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၂-၂)]
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၂-၁)]
၇၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၇) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော် ပေါ်လစီအရ လမ်းစည်းကမ်း ယာဉ်စည်းကမ်းကို လက်ယာကပ်မောင်းစနစ်ကို ပြောင်းလိုက်တယ် ပြောင်းလိုက်တာလည်း အဆင်ပြေတုန်းပဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၁-၃)]
အစ်ကိုတို့ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ် အရှိန်အ၀ါ ကျန်ခဲ့တယ် အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်ကားတွေကို သုံးတဲ့အတွက် လက်ဝဲကပ်မောင်း စနစ်ကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့ အဲ့တုန်းကတော့ သူ့စနစ်နဲ့သူဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ ၇၀ ခုနှစ်ရဲ့ဟိုဘက်ပိုင်းမှာက လမ်းကို ဘယ်ဘက်ကမောင်းတယ်
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၁-၂)]
ကားအရေအတွက်ကနည်းတယ် ဂျပန်ကားကို မှီခိုမှုနည်းသေးတယ် အရင်တုန်းက မြန်မာပြည်က ချမ်းသာတယ် ဥရောပတို့ အမေရိကန် အင်္ဂလန်တို့ ကားကိုသုံးသေးတော့ စတီယာတိုင် system ကကိုက်သေးတယ်...
Let's Talk [ ဦးသက်ဝင်း [ကားပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်] အပိုင်း(၁-၁)]
Let's Talk [ မြတ်သက်မွန် (အပိုင်း-၁-၃) ]
ဆရာတော်ကနောက်တော့ စေတနာပေါက်လာပြီး မေးတယ် တညင်က ခွေးကောင်ရေက ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ ပြီးတော့ ဆရာတော်က ပဲခူးရိုးမနဲ့ ဆက်သွားတဲ့ဘက်က မြေနေရာကိုပေးတယ်
Let's Talk [ မြတ်သက်မွန် (အပိုင်း-၁-၂) ]
ခြံထဲက လွတ်လာတဲ့ ကောင်တွေဆိုလည်း နည်းမျိုးစုံ နဲ့ ရိုက်သတ်ပစ်ကြတယ် ခွေးခြံ အလုပ်သမားတွေက ကျွန်မသိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုးလို့ မပြောကြဘူး ဒါပေမယ့် အကောင်းရေ စစ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်မသိတယ်..
Let's Talk [ မြတ်သက်မွန် (အပိုင်း-၁-၁) ]
သူတို့ရွာမှာ ခွေးဂေဟာကြီးရှိနေတာကို သူတို့မကြိုက်ကြဘူး ရွာခိုက်တယ်လို့ မြင်ကြတယ် သူတို့ရွာမှာ ဗိုက်ကြီးသည် သေရင်လည်း ကျွန်မတို့ခွေးခြံရှိလို့ တစ်ရွာလုံးဘာကြောင့်သေသေ ဒီခွေးခြံရှိလို့ ခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မခွေးခြံကို ရွှေ့စေချင်ကြတယ်
Let's Talk [ ချစ်သုဝေ (အပိုင်း-၂-၃) ]
ထရေဇာတို့ တိုင်းပြည်က ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်လာကြမယ် ..ထရေဇာတို့တိုင်းပြည်က ပိုပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမှုအား အရမ်းနည်းခဲ့တဲ့ အတွက် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုးတွေက လာမှာ ..
Let's Talk [ ချစ်သုဝေ (အပိုင်း-၂-၂) ]
လူသန်းပေါင်းများစွာက နှစ်သက်နေတာ သဘောကျနေတာ ချီးမွမ်းနေတာ ထက် ဥာဏ်ပညာရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ချီးမွမ်းလိုက်တာမျိုးကို မမကပိုတန်ဖိုးထားတတ်တယ် ..
Let's Talk [ ချစ်သုဝေ (အပိုင်း-၂-၁) ]
ထရေဇာရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေ့ါလေ .. လူတိုင်းမှာပေါ့ ပရဟိတ စိတ်လေးတွေ ရှိတတ်ကြတယ်..အဲ့မှာမှ အတ္တနဲ့ပရ ပေ့ါနော်..တချို့တွေက အတ္တနဲ့ယှဉ်လာတဲ့ အခါမှာ ထုတ်မသုံးဖြစ်လိုက်ဘူး ...
Let's Talk [ ချစ်သုဝေ (အပိုင်း-၁-၂) ]
" လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘ၀ရဲ့ အချိုးအကွေ့တွေမှာ decision တွေချရတာပေါ့ ၊ လတ်တလောအချိန်ရော ရှေ့ကိုယ်လျှောက်ရမယ့် Furure ရော အရာအားလုံးကို တွေးတောပြီး decision ချရတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင် decision ချဖို့က အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထရေဇာ ထင်တယ်.. "
Let's Talk [ ချစ်သုဝေ (အပိုင်း-၁-၁) ]
Let's Talk [ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း (အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်) အပိုင်း (၂-၃) ]
" အောင်မြင်တဲ့ လူတွေဟာရူးကိုရူးရမယ် ဦးအောင်ဆို ငါးနှစ်သားလောက်ကတည်းက ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်သိတယ် ခုခေတ်လူငယ်တွေကို ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ဘယ်အချိန်ထဲက သိလဲ ဘယ်လောက်သိလဲ လို့ ဦးအောင်မေးချင်တယ်.... "
Let's Talk [ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း (အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်) အပိုင်း (၂-၂) ]
" အောင်မြင်တဲ့ လူတွေဟာရူးကိုရူးရမယ် ဦးအောင်ဆို ငါးနှစ်သားလောက်ကတည်းက ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်သိတယ် ခုခေတ်လူငယ်တွေကို ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ဘယ်အချိန်ထဲက သိလဲ ဘယ်လောက်သိလဲ လို့ ဦးအောင်မေးချင်တယ်.... "
Let 's Talk [ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း (အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်) အပိုင်း-၁-၃ ]
Let 's Talk [ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း (အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်) အပိုင်း-၁- ၂]
အဓိကကတော့ ဦးအောင်က ရွှေသင်တန်းလို့ အမည်မပေးရင် လူစိတ်မ၀င်စားမှာဆိုးလို့ ရွှေသင်တန်းလို့ အမည်ပေးပြီး လာတက်တော့မှ ဦးအောင်က သူတို့မထင်ထားတဲ့ ကိုယ်ကွမ်းယာသည်ကနေ ရွှေကုန်သည်ဘယ်လိုတက်လှမ်းခဲ့ရတယ်...
Let 's Talk [ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း (အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်) အပိုင်း-၁-၁ ]
ရွှေသင်တန်း အပတ်စဉ် (၁) ဆိုတာက လူတွေကိုခေါ်မသင်တော့ဘဲ ဦးအောင်တပည့်အရင်းတွေကို (၁) လို့ပေးလိုက်ပြီး ရွှေသင်တန်းအပတ်စဉ် (၂) ကမှ လူအများကိုခေါ်ပြီး သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းပါ
Let's Talk [ စာရေးဆရာ အတ္တကျော် (အပိုင်း-၁-၃ ) ]
တအားကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး ကျွန်တော်ဖတ်မိတာလေးတွေကို ပြန်ပြောတာပါ ၊ သားငယ်သမီးငယ်များ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းခြင်း အနုပညာ စာအုပ်ဆိုရင် ဖတ်ရင်းကနေ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး ရေးတာပါ ..
Let's Talk [ စာရေးဆရာ အတ္တကျော် (အပိုင်း-၁-၂ ) ]
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာ သေစာရှင်စာလေးတတ်တော့ သူတို့ဆီမှာ ဒီလိုဟာတွေရေးသားနေကြပါလား ဒီလိုဟာတွေဆွေးနွေးနေကြပါလားလို့ ကျွန်တော်သိလာတယ်
Let's Talk [ စာရေးဆရာ အတ္တကျော် (အပိုင်း-၁-၁ ) ]
ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ် ရည်စားထားကြတယ် ဘယ်သူမှရည်းစားထားနည်းစာအုပ်မဖတ်ဘူးဘူး အိမ်ထောင်ပြုကြတယ် ဘယ်သူမှ လင်လုပ်နည်း မယားလုပ်နည်းစာအုပ်မဖတ်ဘူးဘူး အဲ့ဒီကနေ အိမ်ထောင်ကြပြီး ကလေးသား၊သမီး မွေးလာတော့လည်း ဘယ်သူမှ မိဘလုပ်နည်းစာအုပ် မဖတ်ဘူးဘူး ရှိမှန်းလည်းမသိဘူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မသိခဲ့ပါဘူး
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၂-၃) ]
"ခုခေတ်မှာ ဈေးပြောတဲ့ ခေတ်ကုန်နေပြီတဲ့..ဟေ ဘယ်လိုခေတ်ရောက်သွားလို့တုန်း..လာရိုက် ရော့ဒါပဲယူ အဲလိုခေတ်ရောက်နေပြီတဲ့..အမယ်လေး အဲလိုလား အဲလိုဆို မလိုက်ဘူးပြောလိုက်တယ်.."
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၂-၂) ]
"သူတို့သည် လူယဉ်ကျေးလေ..လူကောင်းမဟုတ်ဘူး..အမေတို့သည် လူယဉ်ကျေးမဟုတ်ဘူး..လူကောင်းဖြစ်တယ်.."
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၂-၁) ]
အနုပညာရှင်တွေ ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါမှာ အိမ်အလာမခံ အိမ်အ၀င်မခံတဲ့ဟာမျိုးတွေကို အမေကစုစည်းပြီးတော့ သင်္ကြန်တိုင်းထွက်က ရတဲ့ပိုက်ဆံ အိမ်ငှားပေး နောက် အိမ်ရာထူထောင်တယ် အဲဒီဟာ အမေ့ဘ၀မှာ အမြတ်နိုးဆုံး ဒီထက် မြတ်နိုးတာမရှိတော့ဘူး
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၁- ၃) ]
အတွေ့ အကြုံတွေကတော့ အများကြီးပေါ့လေ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဘ၀လေးက ဖြတ်သန်းရတာ ပျော်စရာပေါ့ အဲ့ဒီထက် နည်းနည်းကျော်လာတော့ ဖြတ်သန်းရတာက တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် ပျော်စရာလေးတွေထက် စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဒီအပေါ်မှာ သွားတဲ့လမ်းလေးပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းရတာတော့ ရှိတာပေါ့ အဲ့ဒီကနေ ဒီဘက်တက်လာတော့ အတွေ့အကြုံတွေက ပြောလို့ကောင်းတာလဲရှိတယ် ပြောလို့မကောင်းတာလဲရှိတယ်....
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၁-၂ ) ]
Let's Talk [ အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့စန်း (အပိုင်း-၁- ၁) ]
Let's Talk [ဂျူး(အပိုင်း (၃-၃)]
- အချစ်ကိုကျွန်မတန်ဖိုးထားပါတယ်..အချစ်ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မခံစားရပါတယ်..ကျွန်မအတွက်ကတော့ အချစ်ကိုရေးရတာပော်ျပါတယ်..၀ါသနာပါပါတယ်။
Let's Talk [ဂျူး(အပိုင်း (၃-၂)]
Let's Talk [ဂျူး(အပိုင်း (၃-၁)]
Let's Talk [စာရေးဆရာမ ဂျူး(အပိုင်း-၂-၃)]
-ကျွန်မကတော့ ကျွန်မဘ၀ကိုကံကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်..ကျွန်မရဲ့မိဘတွေ၊မောင်နှမတွေနဲ့ ဆရာတွေနဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ နေရလို့ပါ..
Let's Talk [စာရေးဆရာမ ဂျူး(အပိုင်း-၂-၂)]
Let's Talk [စာရေးဆရာမ ဂျူး(အပိုင်း-၂-၁)]
Let Talk [ စာရေးဆရာမ ဂျူး (အပိုင်း၁-၃ ) ]
ကျွန်မစာရေးနေတာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ၂၀၁၄ ဇွန်လလောက်ကစရေးတာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်တော့ ၂၀၁၅ ဧပြီမှ အဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီး ရေးတာ အဲ့ဒါလည်းမပြီးခဲ့ဘူး တကယ်လို့ပြီးခဲ့ရင်တော့ ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်မှာ နောက်ဆုံးစာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.....
Let Talk [ စာရေးဆရာမ ဂျူး (အပိုင်း၁- ၂) ]
တကယ်လို့ပြီးခဲ့ရင်တော့ ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်မှာ နောက်ဆုံးစာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.....
Let Talk [ စာရေးဆရာမ ဂျူး (အပိုင်း၁-၁ ) ]
ကျွန်မစာရေးနေတာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ၂၀၁၄ ဇွန်လလောက်ကစရေးတာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်တော့ ၂၀၁၅ ဧပြီမှ အဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီး ရေးတာ အဲ့ဒါလည်းမပြီးခဲ့ဘူး
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၂-၃) ]
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၂-၂) ]
-ဆရာတို့မြန်မာပြည်မှာ မြေကြီးကမရှားဘူး ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာ့မြေကြီးကဈေးကြီးတာလဲ..
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၂-၁) ]
-ဆရာကတော့ မူတစ်ခုတော့ဆရာအနေနဲ့ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်..ဆရာသားသမီးတွေကိုလည်းဆရာတို့ကငွေကြေးအမွေပေးတာထက် ပညာအမွေပေးတာဟာဆရာပိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်..စိတ်လည်းပိုချပါတယ်.
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၁-၃) ]
ဆရာတို့တုန်းက ဆရာဝန်ပညာ အင်ဂျင်နီယာ ပညာဆိုတာလူတွေတော်တော်ဂုဏ်ပြုပါတယ် အဲ့ဒါကို တောသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဆရာ့ကိုဆရာလည်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်......
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၁-၂) ]
ဆရာဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တကယ်တောကျတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာကမွေးဖွားလာတာပါ စာမတတ်ပေမတတ် မြန်မာလိုလည်းမတတ်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကနေ မွေးဖွားလာတာပါ
Let's Talk [ ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း (အပိုင်း-၁-၁) ]
ပထမဆုံး ဆရာစကားပလ္လင်ခံချင်တာကတော့ ဆရာကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပါ
Let's Talk [ ရန်အောင်(အပိုင်း-၂- ၃ ) ]
လူငယ်တွေကိုယ်စားပြုတဲ့ မင်းသားတစ်ခေတ်ကို စပြီးထူထောင်တာပေါ့နော် ကိုကျော်သူက စခဲ့တဲ့အခါမှာ လူငယ်မင်းသားတွေအကုန်လုံး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရုပ်ရှင်လေယကတစ်ခေတ်ကို ပြန်ပြီးလှုပ်ခတ်သွားစေတာပေါ့ ......
Let's Talk [ ရန်အောင်(အပိုင်း-၂- ၂ ) ]
ပြီးတော့ လွယ်အိတ်လေးဘေးတစ်စောင်းလွယ်ပြီး လွယ်အိတ်လေးထုံးခဲ့တာက သူ့ရဲ့ Signature ပေါ့
Let's Talk [ ရန်အောင်(အပိုင်း-၂- ၁ ) ]
ကိုကျော်သူကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြင်ဆရာထဲမှာ ပါတာပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစ်ကိုတို့ထက်နှစ်နှစ်စောပြီး သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာ
Let's Talk [ ရန်အောင် (အပိုင်း-၁- ၃)]
အစ်ကိုတို့ခေတ်တုန်းက တအားကြိုးစားရတယ် ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ပြန်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ တစ်နှစ်စောင့်ရတယ် ဒါကြောင့် အစ်ကိုတို့ခေတ်က မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ ဟာကွက်မရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်...............
Let's Talk [ ရန်အောင် (အပိုင်း-၁- ၂)]
ကိုယ်တို့စရိုက်တဲ့ကားက ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ စပြီးရိုက်ပါတယ် ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာရုံတင်ပါတယ် ရုံပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် တစ်နှစ်ကြာတယ် အခုနှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ အရမ်းကွာသွားတယ်
Let's Talk [ ရန်အောင် (အပိုင်း-၁- ၁)]
အစ်ကိုတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကိုစပြီးပြောမယ်ပေါ့နော် အစ်ကိုတို့ရုပ်ရှင်စရိုက်တုန်းကဆိုရင် ကာလာခေတ်ကပေါ်ဦးစလေးပေါ့နော် Black and White လည်းမပျောက်သေးဘူး
Let's Talk [Shatara & Oo - (C)]
ဂိမ်းတစ်ခုမှာဆိုရင် ဂိမ်းရဲ့ Rule ကိုသိရမယ် ... အဲ့ Rule ကိုသိမှ ကိုယ်က နိုင်အောင်ကစားလို့ရမှာလေ ... အကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ Callenge ကိုညမတို့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလေ ....
Let's Talk [Shatara & Oo -(B)]
ဒီဇိုင်နာဆိုတာ ယောကျာင်္လေး လုပ်တယ်လို့လဲ အဲ့လောက်ထိမသိဘူးပေါ့ ... တကယ်ဖြစ်လာတယ် ဆိုတော့လည်း အခုအလုပ်မှာပျော်တာပေါ့နော် ...
Let's Talk [Shatara & Oo -(A)]
Style Secret အစီအစဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံး Final ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဇကာတင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သျှတရနှင့် ဦး တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်..
Let's Talk ( အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄- ၃ ] )
စံဇာဏီဘို နဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက် ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄]
Let's Talk ( အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄- ၂ ] )
အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက် ၊ ဦးထွန်းလွင် (မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင်) နဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက် ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄]
Let's Talk ( အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄- ၁ ] )
Laila Khan ၊ အကယ်ဒမီ ဝေဠုကျော် နဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက် ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းစကားများ [ အပိုင်း-၄]
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်း စကားများ (အပိုင်း-၃)- ၃]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခဲ့ရသူ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာနဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ သူတွေကအလိုလိုနေရင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနေရသလို ဖြစ်နေတာပေါ့
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်း စကားများ (အပိုင်း-၃)- ၂]
အကယ်ဒမီ လူမင်း၊ Steven Oo၊ ကျော်သူ၊ မာလာတင်၊ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် တိုနဲ့မေးမြန်းထားတဲ့ အကောင်းဆုံးရင်တွင်း စကားများ (အပိုင်း-၃)
Let's Talk [ အကောင်းဆုံးရင်တွင်း စကားများ (အပိုင်း-၃)- ၁]
ကျွန်တော်တို့ Fashion လုပ်တာက ကုန်ကြမ်းပဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ ကျွန်တော်တို့က ဒီဇိုင်းလည်းရောင်းနေတာ ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်းပေါ်မှာတင် ၀တ်တဲ့ Customer တစ်ယောက်ကိုပေးတဲ့ Confidence အဲ့ဒီဟာကိုရောင်းတာ..............
Let's Talk -ဒီဇိုင်နာ မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်
နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို အားကျပြီးတော့ Popular ဖြစ်ချင်လို့ လူစိတ်ဝင်စားခံချင်လို့ ဒီဇိုင်နာအလုပ်ကို လုပ်နေကြတဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ်.....
တစ်မျိုးကတော့ ဒီဇိုင်းပညာကို ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို တကယ်ပဲဝါသနာပါလို့ သူတို့ဘ၀ကို နှစ်မြှုပ်ပြီးတော့မှ ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ ရေကုန်ရေခန်းရတဲ့နေရာကနေ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့ လူတွေနဲ့
အခုခေတ်မှာပေါ့နော် ဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်လေးတွေ ၀ါသနာပါတဲ့လူငယ်လေးတွေ တကယ်ပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒီလူငယ်တွေထဲမှာရော ၀ါသနာပါတဲ့လူတွေထဲမှာ ဒီဇိုင်နာ လောကထဲက လူတွေထဲမှာတောင် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်
Let's Talk(အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက်-အပိုင်း ၂)
ကျွန်မလုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာတော့ ကျွန်မဟိုးအစောကတည်းက အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကို လုပ်ပါတယ် ဒီတိုင်းပြည်မှာကတော့ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာ ပင်ပန်းတယ်လို့ တော့ပြောပါတယ် ........
ကိုယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာတော့ ကိုယ်ရအောင်ပေါ့နော် သီအိုရီထဲမှာ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာကတော့ စည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ အတွက်ဆိုပြီးပေါ့ စဉ်းစားရပါတယ်
Let's Talk(အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက်-အပိုင်း ၁)
လူဆိုတာ သက်လုံကောင်းအောင် မွေးရတယ် အနုပညာသည်ဆိုတာ ပိုပြီးသက်လုံကောင်းဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့ လူကကြာကြာသွားတဲ့ ခရီးမှာ သက်လုံမကောင်းရင် နေခဲ့ရမှာပေါ့ အချိန်ကိုရောင်းစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်း
အိမ်မှာက သမီးအဖေကလည်း မင်းသားဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ Team ရှိတယ်ပေါ့ Team ရှိတဲ့ အတွက် အိမ်ရဲ့ သိက္ခာအတွက် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားက တစ်နှစ်ကိုတစ်ထုတ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ထုတ် ထုတ်လုပ် တတ်တယ်ပေါ့....
တာဝန်သိ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျေပွန်အောင် လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ လုပ်ပေးတာပါ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့  အနေအထားအရ ကွက်လပ်တွေက အများကြီးပဲလေ အဲ့ဒီကွက်လပ်ထဲမှာ ကိုယ်ဖြည့်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိတဲ့ နေရာတွေကို လိုက်ဖြည့်ရတာပေါ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ပြောတယ် ဆိတ်ပါးစပ် နှမ်းပက်တာမျိုးလို့ ပြောတယ် ဒါပေမယ့်လည်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတော့ လုပ်ပေးရမှာပဲလေ.....
"ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ ချစ်ချင်လည်းချစ်မယ် မုန်းချင်လည်းမုန်းမယ် ဘယ်တော့မှတော့ ပစ်ပယ်လို့မရဘူး မပတ်သက်ချင်လို့မရဘူး ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး" (Part-2, Seg-3)
Let's Talk- ဆရာဦးထွန်းလွင်(အပိုင်း-၂)
ဒီရေကြီးမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေကြီးမှု သမိုင်းမှာ အဆိုးဆုံးလောက်လို့ ပြောရမှာပဲ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကတည်းက ရေကြီးမှု အဆိုးဝါးဆုံး သတ်မှတ်တဲ့ နှစ်က ၂၀၀၄ ၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဆိုတာက ဇလဗေဒ ဌာနခွဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြေခြေ ၁၀ ခုတိုင်းတာပေးတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက မြေခြေ ၁၀ခုမှာ ရှိတဲ့ ဇလဗေဒ စခန်းအားလုံးဟာ စိုးရိမ်ရေအမှတ်ကျော်သွားတယ် (Part-2, Seg-1)
"မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟာ အထိမခံတဲ့ ရွှေပန်းကန်ပဲ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ သဘာဝဘေး ဖြစ်ရင် ပွဲခင်းထဲ ခဲပစ်သလိုပဲ မလွယ်ဘူး သေမှာပဲ " Part-1 (Seg-3)
Let's Talk- ဆရာဦးထွန်းလွင်
"ဒီနှစ်စောစောပိုင်းက မြန်မာပြည်မှာ ရေကြီးတယ် ရေကြီးတော့ ရေတွေကို တော်တော်ရွံတယ် ကြည့်တောင်မကြည့်ချင်ဘူး သိပ်ပြီးတော့ ဖီလင်မပြင်းထန်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရေက ရှားအုံးမယ် ရေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ သောက်ရေသုံးရေ ကန်ရေတွေက အကုန်ပြတ်သွားပြီ" Part-1 (Seg-2)
"အငြိမ်းစားယူတာကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ယူတာပေါ့ ကျွန်တော် အငြိမ်းစားယူတုန်းက ကျွန်တော့် ရာထူးက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အကြံပေးအရာရှိပါ ဌာနမှာ ၁၉၆၅ မေလသုံးရက်နေ့ ကတည်းက ၀န်ထမ်းဖြစ်လာတော့ အသက်က အရမ်းငယ်သေးတာပေါ့ အဲ့ဒီကတည်းကနေ မိုးလေ၀သဌာနမှာ အမှုထမ်းခဲ့တာ စုစုပေါင်း လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပါ ...ကျွန်တော့် ဘ၀တစ်သက်တာအမှတ်ရစရာတွေ ကတော့ အများကြီးပေါ့ ခက်တာက ပြောစရာတွေအားလုံးကလည်း ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေ ဖြစ်နေတာပါ......." Part-1 (Seg-1)
Let's Talk-Style Secret မှ ဆန်ခါတင် ၆ ဦး
ပုံ့ဟေခင် >>ကျွန်တော်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က Broken Child လေ။ အမေနဲ့ဘဲ နေရတာ။ သူများတွေလို မိစုံ၊ဖစုံမရှိဘူး။ ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တော့ သျှတရ နဲ့တွေ့တယ် သူ့ဘ၀ကြီးကိုဘယ်လိုရပ်တည်လည်းတွေ့တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားရှိသွားတယ်..Part2(Seg 3)
Let's Talk- Style Secret မှ ဆန်ခါတင် ၆ ဦး
မင်းသူရိန် >>ဒါကတော့ခံယူချက်ပါပဲ။ တချို့က ခေတ်အမြင်ပေါ့နော်။ ငယ်ငယ်တုံးကဆိုရင် အပ်ချုပ်တာတို့၊ကျောင်းဆရာလုပ်တာတို့ မကြိုက်ကြဘူး။ သိပ်ပြီးတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အလုပ်လို့မထင်ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်း အရမ်းခေတ်မီလာတယ်။ အင်တာနက်၊ ၀က်ဆိုက်ဒ် တွေကနေကြည့်တယ်။ ပြန်ချုပ်ဝတ်တဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာတယ် ....Part 2(Seg 1)
Let's Talk -Style Secret မှ ဆန်ခါတင် ၆ ဦး
ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးထဲကနေ ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတောင်းလိုက်တယ်။ ဆုရအောင်လုပ်လေ၊ စာမေးပွဲအောင်အောင်လုပ်လေ။ ကျွန်တော်က...Part2(seg 2)
ကိုသျှတရ အကျီင်္နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ညမဟာက ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ပြန်တွေးတော့ ညီမက detail အကုန်လုပ်တယ်ပေါ့။ ကိုသျှတရ အကျီင်္ဆိုရင် Dress တစ်ခုလုံးကိုမြင်ရတာပေ့ါ။ ညမရဲ့အကျီင်္က ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း အဆင်ပြေသွားတာပေါ့....Part 1(seg 2)
Let's Talk - Style Secret မှ ဆန်ခါတင် ၆ ဦး
ဒီဇိုင်နာဆိုတာ အပ်ချုပ်ပညာနဲ့မတူဘူး အရမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးပေါ်မူတည်ပြီး အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ ဂျပန်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေ ပုံသေနည်းကျကျပေ့ါနော်။အရမ်းကိုသူ့ Technique နဲ့သူရှိတယ်ပေ့ါ ...Seg-2
အရမ်းပျော်ပါတယ် ဖြေးဖြေးချင်းတော့ တက်သွားဖို့ကြိုးစားတယ်.. ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ကရှိလိုက်မရှိလိုက်ဖြစ်နေတယ်..ဒီအခြေအနေထိရောက်လာတာကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ထဲမှာ အရမ်းပျော်တယ်....
Let's Talk -ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်
" ကျွန်မတို့ ဥပဒေ ချိုးဖောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး..ကျွန်မတို့မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး..ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စာရင်းအင်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသား..အလုပ်မလုပ်ရတော့ဘူးဆိုရင် ဒီငွေတွေကို ဘယ်သူ့ကိုပြန်အပ်ရတော့မလဲ..ဒီငွေတွေဟာ ကျွန်မတို့ကို အလှူရှင်တွေပေးထားတဲ့ ငွေ..အလှူရှင်တွေ ပေးထားတဲ့ ငွေတွေသည် ကျွန်မတို့ အသုဘချဖို့အတွက် လှူထားတာ..နာရေးကိစ္စလုပ်ဖို့ လှူထားတာ.." Part 2
Let's Talk-ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်
" ကျွန်မရဲ့ ပရဟိတ သက်တမ်းက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခဲ့တာလည်း ကာလကြာပါပြီ အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်..အဲ့ထဲမှာမှ ကျွန်မ တော်တော်ကာလကြာရှည်လုပ်ခဲ့တာက မိဘမဲ့ ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးပါ .. မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိဘမဲ့ကလေးတွေကို အင်မတန်မှ တွေ့ ရင် မနေနိုင်ဘူး... အဲ့တော့ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာတွေ ဆိုရင် ကျွန်မ မသိတဲ့ ဂေဟာတော်တော်ရှားပါတယ်...." Part 1
Let's talk-Mar Lar Tin
"အဖေမရှိပဲနဲ့ ဒီနှစ်ယောက်ကို ကျွေးမွေးရတာ တော်တော်ပင်ပန်းတယ် အငတ်ခံရတယ်..အဲဒါကြောင့် အန်တီက ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကို မကွဲသွားစေချင်ဘူး..သမီးလေး အရမ်းလိမ္မာပါတယ်..သားလည်း အရမ်းလိမ္မာပါတယ်..အရမ်းအန်တီပင်ပန်းသွားတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို အိမ်လာခွင့်မပြုထားဘူး" Part-2
Let's Talk- Marlar Tin (1.8.2015)
"အန်တီမအော်ရင်လည်း သူတို့မကြောက်ဘူး ဘယ်လောက် အသက်တွေကြီးနေ ကြီးနေ အန်တီ့ကျောင်းရောက်ရင် သူတို့က မူကြိုဖြစ်သွားတာ အဲဒီတော့ အန်တီက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် သူတို့လှနေတယ် သူတို့ချောနေတယ် သူတို့အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေနေတယ် သူတို့လေးတွေ ပြေလည်နေတယ်ဆိုရင် ဒါအန်တီ့ဘ၀ပဲ " Part-1
Let's Talk- Laila Khan
"သူများအိမ်ထောင်ကို တမင်တကာ ဖြိုခွဲထားတဲ့ မိန်းမမျိုးတွေ ဘာတွေ ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ရှိနေလို့ရှိရင် အရင်တုန်းက ခင်ခဲ့ရင်လည်း သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲလိုမိန်းမမျိုး လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်း မနှုတ်ဆက်ဘူး" (Seg B )
Let's Talk-Laila Khan
"ရုပ်ရှင်ကားလေး နာမည်က ရာဇ၀င်ရိုင်းသူများ..မြင့်မြတ်ရယ်၊ ပထရစ်ရှာရယ်ပါတယ်..ဒီကားလေးမှာ အစ်မက Positive Character..ဒီကားထဲမှာ ဦးမျိုးက ပြီးခဲ့တဲ့ character နဲ့ လုံးဝကို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ character မျိုးကို ပေးထားတယ်" (Seg C )
"ကျွန်မက ဘောလီးဝုဒ်မှာရှိနေခဲ့စဉ်တုန်းက ကိုယ့်မြန်မာပရိသတ်နဲ့လည်း အရမ်းကို အထိအတွေ့ရှိချင်တာ..ဦးမျိုးမင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာကို သက်သေပြလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်..အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေနဲ့ရော အထိအတွေ့ရသွားတယ် ပြီးတော့ ကိုယ့်မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူ စုပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့် ရသွားတယ် အရမ်းကျေနပ်မှုရသွားတယ်..အရမ်းဝမ်းသာတယ်" (Seg A )
Let's Talk- ကျော်သူ
"ပရဟိတ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အခက်အခဲအတားအဆီး မျိုးစုံကြုံရတယ်..ကျွန်တော်တို့မှာ အားကိုးဆိုလို့ ၀န်ကြီးချုပ်တို့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ရှိတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့က သစ္စာပဲဆိုရတာလေ..အဲလိုသစ္စာဆိုတဲ့အတွက် ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်တာ.." (Part-3)
"မူးရစ်မကောင်းဘူးလို့ လူကြီးတွေက ပြောရင် မလုပ်ဖို့ မစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ ဒါအရေးကြီးတယ် လူငယ်တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးပေါ့လေ.." (Part-2)
Let's Talk -ကျော်သူ
"ကျွန်တော့်ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းဆိုပြီးတော့ သတင်းစာထဲမှာ ထည့်တယ် ကျော်သူဆိုလို့ နာမည်ပါတဲ့အတွက် ထည့်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး" (Part-1)
Let's Talk (Pyae Soe Aung)
"လူဆိုတာက မသိဘူးဆိုတာ မရှိဘူး မတတ်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး မလုပ်ချင်လို့ ငြိမ်နေတာပဲရှိတယ်လေ မလုပ်တတ်လို့ ငြိမ်နေတာတော့မရှိဘူး ကိုယ်က ဒီအလုပ်ကို လုပ်စားလာတာ ကြာသွားပြီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကတော့ အာမခံတယ်" Seg - 3
"ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံရှိလို့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ အဲဒီတော့ သေးသေးလေးကနေ စပြီးတော့ ကြီးလာတာပါ..မကြီးစန်းဆိုရင် သူများအိမ်ရှေ့ခန်းလေးပဲ သုံးပုံ ပုံတပုံပေါ့ အဲဒီကနေစပြီးတော့မှ သူများအိမ်မှာနေရတယ်" Seg- 2
"ထိုင်းကို သွားမယ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံလိုတာပေါ့ ပိုက်ဆံရှာရတာပေါ့လေ..နောက်ဆုံး မရတဲ့အဆုံးမှာ မကြီးစန်းက သူ့ရဲ့ကားကိုရောင်းတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘန်ကောက်မှာ ကျောင်းထားပေးတာပေါ့" Seg - 1
Let's Talk- Mar Mar Aye
"နိုင်ငံခြား သွားနေဖို့ဆိုတာ စဉ်းကိုစဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး..တခါမှ တခြားနိုင်ငံကိုထွက်သွားပြီး နေမယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲတောင် မရှိဘူး.အိပ်မက်လည်း မမက်ဖူးဘူး" PART - 2
Lets Talk Mar Mar Aye
"အန်တီ့ကို ဘိုတွတ်လို့ခေါ်ကြတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ စားတာပေါ့ ဘယ်သူက ကျွေးကျွေးစားတယ်..ဘယ်သူကခိုင်းခိုင်း အကုန်လုပ်ပေးတယ်..ဘိုတွတ်ရေ စားမလားဆိုရင် အင်းပဲ ဟင့်အင်းဆိုတာမရှိဘူး" Part-1
Let’s Talk - Phyu Phyu Kyaw Thein (13.6.2015)
"တချို့သူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်..အပေါစားကျော်ကြားမှုကို ရချင်တာလို့ပဲ ဖြူဖြူကခေါ်ချင်တယ်..ငါကတော့ cele တစ်ယောက်ကိုတော့ တိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်..FB မှာတော့ဖြင့် သူ့ကိုပြောလိုက်ရတယ်ဟဲ့ ဆိုပြီး ဒါလေးကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူများလား" Seg-3
Let’s Talk-Phyu Phyu Kyaw Thein (13.6.2015)
"မမတို့ management တွေ စဉ်းစားတာကျတော့ အမြဲတမ်း အသစ်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အသစ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဘယ်လို ဆွဲဆောင်ရမလဲ creation အသစ်တွေနဲ့ ဘယ်လို promote လုပ်ရမလဲ ဒါတွေပဲ စဉ်းစားရတာလေ" Seg-2
Let’s Talk -Phyu Phyu Kyaw Thein (13.6.2015)
"အတွင်းကြေဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်အားပေးတာ ခံခဲ့ရသလို ခု water ပါတီ ရေပါတီနဲ့လည်း ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးခြင်းကို ခံရတယ် ..အရမ်း ဂုဏ်ယူပါတယ်.." Seg-1
"ဒီခေတ်က Data ခေတ် လူငယ်တွေဟာ ပညာအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်တွက်သော်လည်းကောင်း သူတို့က Data(အချက်အလက်)တွေ များများမှတ်ဖို့သာလျှင် ဦးနှောက်ကိုအလုပ်ပေးတယ် တခုတခုကို ခံစားဖို့ကျတော့ အားနည်းကုန်ကြတယ်" (Part-2)
"ဦးတို့ကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် ဦးတို့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာတို့ရဲ့ဓလေ့စရိုက်၊ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အလှအပ ဒါတွေနဲ့သာလျှင် ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုအောင် လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားတယ်"(Part-1)
Let's Talk -Moh Moh Myint Aung
"ကံကြမ္မာက မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ life မှာ ၀တ္ထုဆန်နေလို့ပဲလား..ဇာတ်လမ်းပဲ ဆန်နေလို့လားမသိဘူး..မမို့လက်ထပ်ပြီး ငါးလပဲပေါင်းရပါတယ်..မမို့အမျိုးသားက သူ့ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ မကွေးကိုသွားရင်းနဲ့ ကား accident ဖြစ်သွားတယ်..လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူး အခုအိမ်ထောင်သက် ၂၈နှစ်ရှိသွားပါပြီ" (Seg-3)
ပရိသတ်အချစ်က အဓိကပေါ့နော်..နောက်အမြင်မရိုးတာ တစ်ခု..ကလပ်တွေ ဘာတွေသွားလာနေရင်တော့ ပရိသတ်အမြင်ရိုးတော့ အချစ်လျော့တာပေါ့..(Seg 02)
မမတို့ကို ဘဘ ဦးသုခက ရိုက်သွင်းထားတာရှိတယ် လူလိုပြော လူလိုပြော ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တချို့က dialog ဖတ်တဲ့နည်း ကျက်တဲ့နည်းမှားတယ်..စာစကားလုံးနဲ့ ပြောတဲ့လူရှိတယ် ပုဒ်ဖြတ်နဲ့ပြောတဲ့လူရှိတယ်..မမတို့ ဦးကျော်ဟိန်းတို့က ဒါကြီးကိုချိုးပစ်လိုက်တာ...(Seg 01)
နယ်အသီးသီးက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ရင်တွင်းစကားတွေထဲက အကောင်းဆုံးစကားသံတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကား အပိုင်း(၂) Seg3အား ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ...
နယ်အသီးသီးက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ရင်တွင်းစကားတွေထဲက အကောင်းဆုံးစကားသံတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကား အပိုင်း(၂) Seg2အား ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ...
နယ်အသီးသီးက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ရင်တွင်းစကားတွေထဲက အကောင်းဆုံးစကားသံတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံးရင်တွင်းစကား အပိုင်း(၂) Seg 1 အား ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ...Part2Seg 1
Let's Talk -John Lwin
မြန်မာပြည်မှာ တချို့က ထင်နေတာက ပိန်ရင် မော်ဒယ်လုပ်လို့ရမယ် ထင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက မှားတယ်.. Part 2
Let`s Talk-Wai Luu Kyaw (7.3.2015)
"ဗုန်းဗုန်းလဲလောက်အောင် ပင်ပန်းလာမှပဲ နားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေထိ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျ"...
Let's Talk- Myat Thet Mon
လမ်းဘေးမှာ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ခွေးဆိုရင် ကျွန်မတို့ဘာသာ လိုက်ကောက်ပြီး ခေါ်မယ်..အဲလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ အိမ်တွေက လာပို့တဲ့ခွေးတွေကျတော့ လုံးဝလက်မခံတော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခုနကလို နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာဖြစ်လာတဲ့အခါ အကုန်ရှောင်ကြတယ်....Seg-3
ခွေးတွေများရင် များတဲ့အလျောက် ကုန်ကျစရိတ်က အရမ်းကို များတယ်..ခွေးတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ် အလုပ်သမား သုံးယောက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ကျောက်ကုန်းနဲ့သံလျင်နဲ့ ကူးသန်းတဲ့ taxi စရိတ်..နောက်ကျန်တဲ့စရိတ်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ် အဲဒါအကုန်လုံး ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းသွားတယ်..လုံးဝအလှူငွေလ­ည်း လက်မခံဘူးပေါ့နော်..အစားအစာတွေကိုတော့ လက်ခံပါတယ်..Seg-2
Let's Talk- Myat Thet Mon (14.3.2015)
အဓိကကတော့ ဒုက္ခသည် လမ်းဘေးခွေးလေးတွေ၊ ကားတိုက်သွားတဲ့ခွေးလေးတွေ၊ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ ခွေးလေးတွေကို ကျွန်မက ကယ်ချင်တာ..ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောက်ကုန်းခြံထဲမှာ ကောက်မွေးရင်းနဲ့ ခြံထဲမှာတင် အကောင် ၅၀လောက်ဖြစ်လာတာ..Seg 1
သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ခံပြီးတော့ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လာလျှောက်ပေးပါလို့ ပြောစရာလည်း မလိုဘူး..သူတို့ကို ကိုယ်တွေ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာ သူတို့အကုန်သိတယ်..သူတို့ကို စင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေ့လာတာမဟုတ်ဘူး..သူတို့ကို သွားရင်းလာရင်း ကြုံရင်ကြုံသလို ကိုယ်တွေ့လာခဲ့တာ..[Part 1 Seg-3 ]
တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခရောက်သွားတယ်..ပိုက်ဆံသုံးတာတွေလွန်သွားတယ်..အလိမ်ခံလိုက်ရတာတွေ မြန်မာပြည်က ပြန်လာတဲ့အချိန် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄၀ပဲရှိတော့တယ်...[Part 1 Seg-2]
Let's Talk -John Lwin (2.5.2015)
ဖက်ရှင်ရှိုး တပွဲလျှောက်ရင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀ ရမယ် ၃၀၀ ရမယ် ၄၀၀ ရမယ် ပွဲအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ရမယ် ကျွန်တော် အဲဒီကနေစပြီး သင်တန်းတွေဘာတွေတက်လိုက်တယ် မော်ဒယ်အလုပ်လုပ်တယ် (Part 1 Seg-1 )
Let's Talk- Jamen (4.4.2015)
Actor တွေ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ ဗွီဒီယိုက ထွက်အားအရမ်းများတဲ့အခါ တစ်နာရီ ၄၅မိနစ်စာရှိတဲ့ကားတွေဟာ ဆင်တူရိုးမှားဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာတယ် ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးပေါက်ရင် လိုက်ရိုက်ကြတယ် နည်းနည်းလေးလောက်ပဲ ကွဲပြားသွားတယ်..အနုပညာတွေမရှိတော့ဘူး ခံစားရတယ်....Seg-1
Let'sTalk -Steven Oo (25.4.2015)
ဒီဇိုင်နာဆိုတဲ့အလုပ်က လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အရာလို့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး ၀ါသနာရှိရမယ် မွေးကတည်းကိုက တခုခုရှိရတယ် .........Seg 3
များသောအားဖြင့် ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်က စီးပွားရေး ဦးနှောက်ဆိုတာမရှိဘူး..သူတို့ ဒီဇိုင်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဲဒီစီးပွားရေး လူကပဲ ပိုက်ဆံရသွားတာပဲ..ဒီဇိုင်နာက သူ့လစာလေးနဲ့ပဲ လုပ်နေရတယ်..ဆိုတော့ စီးပွားရေး ဦးနှောက်ရှိဖို့ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်... Seg 2
ကျွန်တော့်မိသားစုကလည်း Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက စဉ်းစားခဲ့တာမရှိဘူး ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ချင်လဲ မေးရင် တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်လုပ်ချင်တယ်လို့ အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ် ......Seg 1
Let's Talk! အကယ်ဒမီ လူမင်း
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို မိန်းမတစ်ယောက်က လုံးဝရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချရတယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ်ထင်တယ်၊ဘယ်မိန်းမမှရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။မိန်းမရဲ့ စိတ်အခြေခံဆိုတာရှိပြီးသား၊အထူးသဖြင့် ကိုယ်တို့လိုသရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။..............(Part- 2) (Seg 3)
"ပြီးခဲ့တဲ့ ဥက္ကဌ သက်တမ်းပြီးရင် ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဂျာနယ်တွေမှာလဲ တရားဝင်ပြောထားတယ်၊ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ရွေးချယ်ခံနီးတော့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ခံတယ်၊အဲတော့ကိုယ်က စကား နှစ်မျိုးပြောတယ်၊ကိုယ့်စကားကိုယ်ပြန်ပြင်တဲ့သူဆိုပြီး ဝေဖန်ခံရတယ်"......... (Part- 2) (Seg 2)
"ကိုယ်တို့အနုပညာရှင်တွေက အနုပညာအရည်အသွေးကကောင်းမွန်ဖို့ လိုပါတယ်၊တိုးတက်ဖို့လဲ အများကြီးလိုပါတယ်.........................."(Part- 2) (Seg 1)
ဆုရဖို့ ပြိုင်ပြီး နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်လဲ အဲ့ဒါသေချာတယ် အကိုပဲ ပြုတ်မှာ...အကိုမှာကြတော့ အဲ့လို လာဘ်လုံးဝ မရှိဘူး.....နောက် ကံနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်မရတော့ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ရတယ်ဆိုလဲ ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ “သြော်... ငါ ဒီနှစ်မရပါလား၊ ငါ နောက်နှစ် ကြိုးစားရအုံးမှာပဲ” ဒီလိုလောက်နဲ့ပဲ ဖြေမှာပါ.... အကယ်ဒမီ ရတဲ့ အပေါ်မှာတော့ အကို့ အနေနဲ့ Jealous တော့ မဖြစ်မိပါဘူး........(Part- 1) (Seg 3)
အကိုတို့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ပထမဦးဆုံး ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီပွဲ ကို အောင်မြင်အောင် ခမ်းနားအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒီပွဲကြီး စီစဉ်တင်ဆက်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အနုပညာလောကသားတွေရော ပရိသတ်တွေရော ကျေနပ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ အကိုကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...... အဲ့ဒိကျေနပ်တဲ့ ဝမ်းသာပီတိ စကားသံက ခဏပဲ ဆုရွေးချယ်မှု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဂယက်တွေကတော့ အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ (Part- 1) (Seg 1)
Let's Talk! (မိတ်ကပ် မထက်)(Pop Soul)
"မိန်းကလေးတွေကိုသိစေချင်တာက ဒါတွေကသဘာဝလဲမဟုတ်ဘူး၊ပြူပြင်ဖန်တီးထားတာ၊သမီးတို့ရဲ့ အလှဟာ တကယ့်သဘာဝအလှလေးတွေ၊ဘုရားကပေးထားတဲ့အလှအစစ်တွေပါ၊အဲဒါကသာ စစ်မှန်တဲ့အလှတွေပါ၊ တကယ်တမ်းကျတော့ အတုဟာအစစ်နဲ့ တူချင်တူပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အတုဟာ ဘယ်တော့မှအစစ်ဖြစ်မလာပါဘူး။" Part-3
Let's Talk! (မိတ်ကပ် မထက်) (Pop Soul)
"ရလာတဲ့ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တည်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားဖန်တီးပြီးနေတာပေါ့၊အဓိကကတော့ ဖန်တီးပြီးနေရတာ ပျော်လားဆိုတော့မပျော်ဘူး ၊ကျေနပ်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး၊ကြိုက်လွန်းလို့လဲမဟုတ်ဘူး၊ဒါပေမယ့် ရလာတဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံး လက်ခံတယ်။ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို နောက်ဆုံးကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ရှာဖွေလိုက်တာ " Part- 1
"စာဖတ်ဝါသနာမပါဘူး၊အဓိကအားဖြင့် စာဖတ်ရင် အသိဥာဏ်တိုးပွားမယ်၊ကိုယ့်ကို ကူတဲ့သူဟာစာပဲ ဆိုတာသိလာတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးစာဖတ်တယ်။စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့တွေးတယ်၊တွေးရင်းနဲ့ဖတ်တယ်၊ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့တွေးတတ်လာတယ်၊အသိဥာဏ်ရလာတယ်၊သတ္တိရှိလာတယ်။" Part-2
Let's Talk (Peter)
ကျွန်တော့်သားတွေကို ဒီပညာကို သင်ပေးမယ် သူများတွေဆီမှာ သွားပြီးတော့ ၀န်ထမ်းအနေနဲ့ မကြီးပြင်းစေချင်ဘူး..ကျွန်တော်ရိုက်တာကိုကြည့် သူတို့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် လွှတ်ပေးလိုက်တယ်..ကျွန်တော့်သားတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး....Part-3
လောကကြီးမှာ လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ထဲတီးလို့မရဘူး ၊နှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Sexy ပုံတွေဘယ်လာက်ပဲရိုက်ချင်ချင် တစ်ဖက်က မော်ဒယ်ကိုက ပေးမရိုက်ဘူးဆိုရင် ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး...............Part-2
ကျောင်းပညာက စာရေးတတ် ဖတ်တတ်အောင်သင်ပေးလိမ့်မယ်၊သို့သော် လူတိုင်းကစာသင်ပေးတိုင်း အသိပညာရှိတာမဟုတ်ဘူး.၊ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀နဲ့ပဲဆိုင်တယ်.........
Let's Talk (Nyo Min Lwin)
မိသားစုကိုပေးဖြစ်တဲ့အချိန်အရမ်းနဲပါတယ်။ဒါလေးကိုနားလည်ပေးထားတဲ့သူကိုရထားတဲ့အတွက် ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုလို့ပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတစ်သက်လုံးထည့်ထားရင်တာဝန်ကျေတယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတင်းဆင်ခြေပေးပြီးတော့နေနေရတယ်၊တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးက ကြီးမားပါတယ်.................
လူတစ်ယောက်ကိုချစ်စရာရှိရင်လဲ အရမ်းချစ်တယ်၊မုန်းစရာရှိရင်လဲ အရမ်းမုန်းတယ်။ ကိုယ်စဉ်းစားရင် ပရိသတ်နေရာကနေစဉ်းစားတယ် ။ငါသာပရိသတ်ဆိုရင် ဒီကားကိုကြည့်မှာလား၊ဒီနာမည် ၊ဒီ Attraction နဲ့ကြည့်မိမှာလား၊အဲဒီမေးခွန်းကိုအမြဲတမ်းပြန်မေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်သာပရိသတ်ဆိုရင် ဒါကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကလဲသူများပိုက်ဆံကိုယူပြီးဒါကို မရိုက်သင့်ဘူး။ကိုယ့်ခံယူချက်ကအဲလို......Part-1
ဆင်ဆာအဖွဲ့ကိုမရှိရဘူးလို့မပြောချင်ပါဘူး၊အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Website တွေ ၃၃၀၀၀ ကျော်ဖွင့်ပေးခဲ့ရင် မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကို ဒီထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်သွားဖို့အချက်အလက်ပေါင်း ၃ သောင်းကျော်မလိုပါဘူး အခုလက်ရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အချက် အလက်လေး တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်ပဲ အခုထက်ပိုပြီးတော့ ပရိသတ်ဆီကို 100 % ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်..............Part-2
Let's Talk (Thandah Hlaing)
အရင်အိမ်မှာလဲ Single Mother ဘ၀ပါပဲ၊အဲဒီအရင်အိမ်မတိုင်ခင်က အရင်အိမ်ကလဲ Single Mother ဘ၀ပါပဲ၊ Family ဆိုတာကောင်းရာဆွေမျိုးပေါ့နော်.......Part C
မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ရင်ထဲကစိတ်ခံစားမှုတွေအကုန်လုံးကို အမြဲတမ်း Strong ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်း..............Part B
ဝေဖန်တာကတော့ဟုတ်တယ် အပင်မြင့်လေ လေတိုက်လေ၊ပြီးတော့ ကိုယ်ကလေးနှစ်ယောက်အမေ ဒီဝတ်စုံဝတ်ပြီးမှ ပွဲတက်တယ်ဆိုတော့ အကြီးအကျယ်တစ်ခါထဲ ဂျာနယ်ထဲမှာမပြီးတော့ဘူး၊ကိုယ့်ကျတော့မှလူတွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပေါ့............... Part A
Let's Talk!2014 Special
ပညာအရမ်းတော်တဲ့ စုပုံချစ် ၊ facebook ပေါ်မှာ ကြိုးစားထားတဲ့ သစ်သစ်မြင့်ဆိုင် ၊ 2014 ရဲ့Let's Talk အစီအစဉ်တွေထဲကမှ နောက်ဆုံးအနေနဲ့performance ကို အပြင်းအထန်ဝါသနာကြီးတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ ရဲ့အကြောင်းတွေရယ် ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Let's Talk အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ အရာတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (Seg - 3)
Let's Talk! 2014 Special
မကြီးစန်းရဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှုတွေ ၊ နီနီခင်ဇော်နဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်တို့ ရဲ့မပြေလည်မှုတွေ ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ထုတ်တယ် ၊ ပြည်သူလူထုကော ၊ အနုပညာရှင်တွေကိုပါ classic ဖြစ်စေချင်သော အန်တီပေါက် ( Designer မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်)တို့ ရဲ့အကြောင်းတွေကို သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ ( Seg -2)
အန်တီတူးရဲ့အမြင်ကနေ presenterတွေ ၊ အနုပညာရှင်တွေ ၊ ပရိသတ်စတဲ့ အချက်(၃)ချက်နဲ့ သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ Let 's Talk မှာ ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့သော အစီအစဉ်တွေထဲကမှ ချမ်းချမ်း ရဲ့အိမ်တွင်းရေး ၊ မီးမီးခဲနှင့် ထူးအယ်လင်းတို့ အကြောင်းတွေ ၊ ဆုပန်ထွာရဲ့ လူပြောများနေကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို စပြီး သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ ( Seg -1)